Ifu elimnyama eBukhosini bakwaThokozani Madumisa – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi Top Stories/Ifu elimnyama eBukhosini bakwaThokozani Madumisa
INkosi uDuma engasekho
SEKUPHINDE kwehla ifu elimnyama eBukhosini besiFunda Ugu njengoba kudlule emhlabeni iNkosi uDavid Van Rooyen Duma ngemuva kokugula. Ubineminyaka yobudala engama-66.
Ilungu lomndeni lithi bese kuphele iminyaka emibili iNkosi yahlaselwa isifo sohlangothi nokuthe mhla zili-15 kuNhlolanja kwayenela.
INdlu yoBukhosi bakwaThokozani Madumisa yehlelwa yilo mshophi nje, isababaza amagalelo eNkosi nezinto ezinhle ezenzele isizwe.
Ngokomlando weNkosi uDavid Van Rooyen Duma izalwa uZayoni owayedume ngelikaKhasilentshungu kaMyekezi kaPhosula kaSakhayedwa kaDumisa kaMvenya kaThabisa kaMpanga kaMenzelwa kaSibhuzikazi. Umuzi weNkosi yiseNdungeni. Ishiye uNdlunkulu uMaMbotho owakwabo weNkosi uMbotho engasekho nezingane.
Isizwe iNkosi uDuma besinabele KwaDumisa, eSantombe kanye nase-Underberg, eRichnow. Ibenezinduna eziyisithupha kulezi zindawo.
Umfowabo weNkosi, uMnu uDuiker Duma uchaze iNkosi njengomuntu obebathanda abantu nesizwe ikakhulukazi labo abampofu. “INkosi yashaya umthetho wokuthi bonke abantu abashonile mabangcwatshwe ngokusezingeni elilodwa ukuze kugwenywe ubukhazikhazi nezinye izinto eziningi ezigcina sezehlise isithunzi salowo mndeni osuke ushonelwe. Ikakhulukazi uma kusuke kuyilowo mndeni osuke umpofu akumele kubonakale ukuthi khona ocebile noma oweswele. Okunye okungamagalelo eNkosi ukuqinisekisa usiko lokuhlolwa kwezintombi ukuthi luyenziwa esizweni sayo. Ezolimo ngokunye kwezinto eziseqhulwini okumanje kunenhlangano ebizwa ngokuthi yi-FP United eyenza lemisebenzi yezolimo ebonakala idlondlobala, ebe khona ngenxa yeNkosi,” kuchaza umfowabo.
UNdunankulu weSizwe soThokozani Madumisa, uMnu uMandlakapheli Mpangase ukuqinisekisile ukuthi iNkosi izofihlwa kusasa ngoMgqibelo, eSantombe, kwaDumisa. “Sikhathazekile ngokudlula emhlabeni kweNkosi, namanje sisadidekile akukavumi ukuthi samukele, kubuhlungu kakhulu. Sizwelana kakhulu nesizwe sonke nomndeni,” kuphawula uNdunankulu uMpangase.
UMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu ophethwe uMphathiswa uNkk uNomusa MaDube Ncube udlulise amazwi enduduzo emndenini nasesizweni sonke ngokudlula kweNkosi emhlabeni. “NjengoMnyango sidlulisa amazwi okudabuka nokuzwelana nomndeni nomphakathi ngalesi sikhathi esinzima esifana nalesi. Igalelo leNkosi uDuma likhulu kakhulu njengoba ibisebenza ngokuzikhandla ibeka phambili ukubaluleka komphakathi,” kusho uMaDube Ncube.
Ukudlula kweNkosi uDuma kwenzeka nje, bekusanda kushona amanye aMakhosi kuso lesi siFunda sasoGwini okuyiNkosi uNicholus Valela Mbotho eneminyaka yobudala engama-49 ubudala yesizwe samaMbotho eyashonela esibhedlela iMurchison Ogwini nayo emuva kogugula.
NgoMfumfu mhla zingama-20 kuMfumfu kwashona iNkosi Bhekamahlongwa Khawula enama-59 ubudala woMkhandlu Wendabuko yamaHlongwa, eMzumbe khona ngaphansi kwesiFunda Ugu. Nayo okubikwe ukuthi idlule emhlabeni ngemuva kokugula.